Toeram-pisakafoanana ho an'ny Brunch tsara indrindra any Kildare - IntoKildare
Tsy misy toa ny sakafo atoandro tsara amin'ny faran'ny herinandro.
Tsy toy ny sakafo maraina mihosinkazo izay alatsaky ny amboadia mandritra ny herinandro, ny sakafo atoandro dia zavatra tokony ho tian'ny namana tsara ary angamba… mimosa vitsivitsy.
Nahita toerana dimy tsara indrindra ho an'ny sakafo atoandro izahay tamin'ny faran'ny herinandro.
Lahatsoratra iray nozarain'i Kildare House Hotel 🌸 (@kildarehousehotel)
Ny rivo-piainana mafana sy mahaliana ao amin'ny The Gallops of Kildare House Hotel dia mahatonga azy io ho toerana mety tsara ho an'ny sakafo atoandro
Eo afovoan'ny tanànan'i Kildare no tena anoloranay azy ireo ny atody Florentine na ny Toast frantsay mahafinaritra azon'izy ireo ampiarahina amin'ny maple sy bacon crispy raha mahatsapa mamy kely ianao.
Dunne sy Crescenzi
Lahatsoratra iray nozarain'i Taim AlFalasi تيم الفلاسي | (@Taimalfalasi)
Tara miantsena ve? Miaina sakafo matsiro matsiro ao amin'ny tanàna Kildare, miaraka amin'ny menio mifanaraka amin'ny tsiro rehetra.
Ity dia toerana mahafinaritra hankafizanao ny sakafo italiana sy ny divay italianina ao anaty atmosfera tia mandray sy sariaka.
Lahatsoratra iray nozarain'i Silken Thomas (@silkenthomaskildare)
Akaiky ny Village Kildare sy ny afovoan-tanànan'i Kildare, maninona raha mivoaka daholo ary manana Irlandey iray manontolo ho an'ny sakafo maraina? Ny Silken Thomas dia tsy vitan'ny sakafo fisakafoanana maraina mahafinaritra ihany fa koa ny menio safidy mahasalama izay misy lovia voankazo sy yaorta mamy, lovia porridge ahazoana aina sy scone voaendy vaovao matsiro. Hadinonay ve ny nanonona ilay mofo voasesika zavokà sy toto-masaka?
Trano fisakafoanana zaridaina japoney
Ny zaridaina nasionaly irlandey & zaridaina
Lahatsoratra iray nozarain'i Natalie Collins (@japanesegardenscafe)
Any amin'ny National National Stud & Gardens, ny Japanese Gardens Restaurant dia misokatra manomboka amin'ny 9 ora maraina ary mirehareha amin'ny fanomezana sakafo tsotra sy mahasalama miaraka amin'ny fanamafisana ny fihavaozana sy ny tsiro.
Tsy vitan'ny hoe manana lovia, mofomamy ary kafe mahavariana izy ireo fa koa ny fandraisany an'io Egg McMuffin malaza io. Inona no andrasanao ?!
Lahatsoratra zarain'ny The Brunch Brief (@brunchbrief)
Toerana tsara ho an'ny tranga rehetra.
Ny fanamafisana ao amin'ny Shoda Market Café dia ny sakafo mahasoa tsara, ny kafe mpanao asa tanana ary ny fanolorana divay tokana. Ny lovia ankafizinay dia tsy maintsy ny pancakes misy voaroy vaovao, compote voankazo ary Nutella.